ဘုရားဆင်းထုတော်ကိုးကွယ်လို့ အဖမ်းခံရခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » World News » ဘုရားဆင်းထုတော်ကိုးကွယ်လို့ အဖမ်းခံရခြင်း
Posted by Pye Kun Zaw on Aug 21, 2012 in World News | 15 comments
ဘုရားဆင်းထုတော်ကိုးကွယ်မိလို့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို ဆော်ဒီရဲများက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ပရီမာနက်ပရီရာလက် သွန်ဂါစရီ အမည်ရ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော လူငယ်လေးသည် ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်ထားပြီး ကိုးကွယ်မိလို့ အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ ရှာရီယာ(မွတ်ဆလင်) ဥပဒေအရ ဆင်းထုတော်ပြုလုပ်ကိုးကွယ်ပါက ဖမ်းဆီးနိုင်ပါတယ်။
အာရပ်ကမ္ဘာက မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ သူတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအရ ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်း သီရိလင်္ကာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ရှော့ပင်းမောလ်ထဲက ကလေးငယ်တစ်ဦးကို စိုက်ကြည့်မှုနှင့် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမလက်မှာ အမဲရောင်ကြီးပတ်ထားတာကြောင့် စုန်းမလို့လည်းစွပ်စွဲခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရှာရီယာဥပဒေပြဌာန်းထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင် မသွားခင်သူတို့ဥပဒေတွေကို သေချာလေ့လာသင့်ပါတယ်။
ပထမပိုစ့် ကိုဖျက်ပေးပါခင်ဗျာ။ category မထည့်မိလိုက်လို့ပါ။
ကုလားတောမှာ သွားလုပ်တော့ ဖမ်းခံရမှာ၊ ဘာသာရေး အစွန်းတဖက်ကမ်းေ၇ာက်
နေတဲ့ကောင်တွေလေ ၊ ငါတို့ဆီမှာသာ ဒီကောင်တွေ လွတ်လပ်ေ၇း၇နေကြတာ၊
သူတို့ဆီမှာ သူတို့ဘာသာဝင်ကလွဲလို့ အ၇မ်းတင်းကျပ်ထားတာ အသိသာကြီး ။
သဘောင်္သား တွေ ဆော်ဒီမှာ အရက်သောက်တာ မိရင် လက်ဖြတ် တယ် လို့ ကြားဖူးခဲ့ပါတယ် ။ ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်လို့ သက်သေပြစရာ မရှိခဲ့ပေမဲ့ ဆော်ဒီ က port တွေမှာ သူတို့ မြေ ညစ်ညမ်းမှာ စိုးလို့ဆိုပြီး သဘောင်္သားတွေကို အရေးပေါ် မဟုတ်ရင် ဆိပ်ကမ်းက မြေကိုတောင် နင်းခွင့်မပေးပါဘူး ။ တာဝန်ကျ ဘိုဆင် (သို့) အရာရှိကိုသာ ရေစူး ဆင်းဖတ်ဖို့ gangway လှေခါးက ဆင်းခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ကျန် သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ ခဏ တစ်ြဖုတ် အညောင်းပြေ အညာပြေတောင် ဆင်းခွင့် မပြုပါဘူး ..
ဒါပေမဲ့ လူသားချင်း မစာနာဘူး . လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ် ဆိုတာမျိုးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကန့်ကွက်ကြတာ မတွေ့ဘူးခဲ့ပါဘူး ။
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် မရှိဘူး ဆိုတာလေး နဲနဲလောက် ပြစ်တင်ဝေဖန်တာလောက်တာ တွေ့မိပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့ ရေနံကြောင့် အမေရိကန်လည်း မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး..
ကိုထူးဆန်းရေ.. အကိုပြောတာ ကျနော် အထူးထောက်ခံပါတယ်..
ကိုယ်တွေ့ပါ။… ကျနော် ပင်လယ်နီရောက်နေတော့ ဆော်ဒီအပိုင်ဆိပ်ကမ်းမှာ
ခဏတဖြုတ်အညောင်းအညာတောင် ဆင်းခွင့်မရပါဘူး။ ထွက်လည်ချင်ရင်တောင်
အေးဂျင့်တွေရဲ့ အထူးခွင့်ပြုချက်နဲ့ အပြင်သွားရပါတယ်…။
ဘာသာရေး တယူသန်လွန်းတဲ့နိုင်ငံပါ။ ရေနံနဲ့ ကြီးပွားနေတော့လည်း
ခက်တော့ခက်သား…။ ကိုရင်လည်း စိတ်နာနာနဲ့ ((မြန်မာကွဆိုပီး) ကမ်းစပ်မှာ
အလန်းထွက်ပြီး သေးပန်းခဲ့ပါတယ်… အဟီးး…
ဒီလိုအစွန်းရောက် နိုင်ငံတွေကများ တို့နိုင်ငံကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူး
ကိုးကွယ်စရာရှားလို့ကွယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ မကိုးကွယ်ပဲကိုး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ မကိုးကွယ်
တတ်သေးသမျှ ဘာသာရေးရော၊ လူမှုရေးရော၊ နိုင်ငံရေးရော အစွန်းရောက်နေကြဦးမှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းကိုးကွယ်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိမိကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရား မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရည်မှန်းပြီး ဆင်းထုတော်ထုလုပ်ကိုးကွယ်တာ အစွန်းရောက်တာလား.. တခြားဘာသာတွေမှာလည်း ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ် ကျောက်တုံးတို့စတာတွေရှိကြပါတယ်။
@koyo ခင်များရဲ့ မိုးပြားဒုက္ခ တယ်မသေးပါဂလား…။
မြန်မာပြည်ကတော့… ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေးပြီး.. ကိုယ်ကိုးကွယ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့.. ဘာသာကို.. ဝေဖန်ဆန်းစစ်တာနဲ့တင်.. .(ဗုဒ္ဒဘာသာကိုးကွယ်တာချင်းတူတူလည်း) ဖမ်းထောင်ချပစ်တယ်..
ဘာသာရေးအရ..ရိုးရာအရ.. စီတန်းလမ်းလျှောက်နေတာ.. မသိလို့ဖြတ်လျှောက်မိတာ..မရဘူး..
မြေခံရေခံ. ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုက… ခွဲခြားဖိနှိပ်နေတာ… :?
အနှစ် ၁၀၀၀ ကျိန်စာ..
မကြောက်ပါနဲ့ သူကြီးရယ် … သူကြီး မွတ်ဆလင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံပါတယ် .. :grin:
ဒါမျိုးကျတော့ ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား လူ့အခွင့်အရေးတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးလား တရားတယ် မှန်တယ်လား။
လည်လှီးခံရမှာလားဟင် လုပ်ကြပါဦး။ ကြားဖူးလို့ပါ ဟုတ်လားတော့မသိ။ စိုးရိမ်လို့။